China Inaliti encane ehlala ngaphakathi inaliti Ukukhiqiza nefektri Weirui
Inaliti ehlala uvemvane omncane
Ngemuva kokumunyelwa, kungahlala ngaphakathi emthanjeni isikhathi eside bese kuthi ukumenyezelwa kohlelo lokufakwa kungafakwa kusixhumi somkhiqizo ukumnika, ukugwema ukuphindisela, ukunciphisa ukulimala kwezicubu kanye nokutheleleka nokunciphisa amandla okusebenza kwabasebenzi bezokwelapha; Kungakhiwa ...
Ngemuva kokumunyelwa, kungahlala ngaphakathi emthanjeni isikhathi eside bese kuthi ukumenyezelwa kohlelo lokufakwa kungafakwa kusixhumi somkhiqizo ukumnika, ukugwema ukuphindisela, ukunciphisa ukulimala kwezicubu kanye nokutheleleka nokunciphisa amandla okusebenza kwabasebenzi bezokwelapha;
Kungakhiwa ngaphansi kwe-X-ray;
3.Transparent catheter ende ne catheter eside isixhumi design sokubheka okulula ukubuya kwegazi;
Umhlangano we-catheter ufakwe ipulagi yokuzihlukanisa, evimbela abasebenzi bezokwelapha ukuthi bathwale igazi lesiguli ngesikhathi sokuhlinzwa, kuqedwe ngempumelelo ukutheleleka nokuqinisekisa ukuzinza kwenaliti lapho ifakwa emthanjeni wegazi.
5.Model: Ipeni-like, Butterfly, Nge Injection Valve, Wing Encane, Y-imodeli
Isetshenziselwa umjovo we-hypodermic ezibhedlela, emitholampilo nakwezinye izindawo.
Langaphambilini Inaliti ehlala i-Y
Olandelayo: uhlobo lwepeni lokuhlala inaliti
Izipanji ze-LapIsisu sesisu